ကလေးများတွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာရောဂါ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်မှု နှုန်း ၉၆%
(နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ဥရောပ အသင်း မှ သွေးနှင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုး ကုသခြင်းနည်း Hemoglobinopathy မှတ်တမ်း ၂၀၀၁-၂၀၁၀၊ ≥ ၈၈%၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ကုသခြင်း ၂၀၁၆;၅၁ : ၅၃၆-၄၁)
သွေးရောဂါရှိသော ကလေးသူငယ်များ Haploidentical Stem Cellအစားထိုး ကုသပြီးနောက် ရက် ၁၀၀ အတွင်း သေဆုံးနှုန်း ၀ %
(နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ Eurocord နှင့် ဥရောပ ဆိုင်ရာ သွေးနှင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးအဖွဲ့ (EBMT) ၊ ≤၄%၊ သွေး ၂၀၁၃; ၁၂၂: ၁၀၇၂-၈)
ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ကင်ဆာသည် လူကြီးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ကင်ဆာများနှင့်အတော်အတန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ထို့ကြောင့်သင်၏ကလေးငယ်အတွက်အကောင်းဆုံး ကုသမှုရရှိရန်ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံ၏ကလေးကင်ဆာရှာဖွေကုသရေးပါရဂူများနှင့်သူနာပြုများ၊သွေးရောဂါအထူးကုများကဲ့သို့
အထူးကုများ မှ ကူညီပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။သင်၏ ကလေးမှာ chemotherapy ဖြစ်စေ၊ radiation therapy ဖြစ်စေHaploidenticalရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းဖြစ်စေပြုရန်လိုအပ်ပါကအဆင့်တိုင်းတွင်သင့်အားအထောက်အပံ့ပေးနေပါမည်။
သင်၏ကလေးမှာ ဆေးရုံတွင် အချိန်ထပ်တိုးနေရန်လိုအပ်ပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးသော ‘ကလေးအသက်တာ အစီအစဉ်’ လည်းရှိပါသည်။အော်ရီဂွန်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံတက္ကသ်ိုလ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကလေးများနှင့်မိသားစုပါ
စိတ်သက်သာရာရခြင်းတို့ အတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ
နှစ်စဉ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၄ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာလူနာပေါင်း ၅၉၀၀၀ ကျော်ခန့်ကို ကုသပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကလေးလူနာများအားအတွက်
မိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ ခရီးစဉ်များဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းပို့ဆောင်မှု များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ကျွန်ပ်တို့တွင်
Acute Lymphoblastic သွေးကင်ဆာ(ALL)
Acute Myelogenous သွေးကင်ဆာ
Chronic Myelogenous သွေးကင်ဆာ(CML)
Differentiated Thyroid ကင်ဆာ
Juvenile Myelomonocytic သွေးကင်ဆာ(JMML)
Medullary Thyroid ကင်ဆာ
Osteosarcoma (ကလေးများတွင်ဖြစ်သော အရိုးကင်ဆာ)
Wilms’ Tumor (ကျောက်ကပ် အကျိတ်)
ကလေးကင်ဆာစင်တာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပိုမိုသိလိုပါ ကနှိပ်ရန်။
ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆန်းသစ်သော ကုသမှု
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်မှု နှုန်း ၉၆% (BMT)
Haploidentical ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသနည်း – ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များအတွက် ကျန်းမာသော အနီးဆုံး ဆွေမျိုး ဖြစ်သည့် မိဘ၊ မောင်နှမ သို့မဟုတ် သားသမီး တို့မှ လှူသော မိသားစု stem cell များအား အသုံးပြူသော ကုသခြင်း နည်း။Learn more
GvHD အား ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကုသရန် Photopheresis ဟုခေါ်သော ဆန်းသစ်ကုထုံးတစ်ခု
Photopheresis သည် ထိုးဖောက်မှုမလို၊ နာကျင်မှုလဲ မရှိသော ကုသနည်းဖြစ်ကာ graft versus host ရောဂါ (GvHD) ပိုတိုးလာခြင်းအားတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုအားလှုံ့ဆွပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ထံတွင် ကုသမှုခံယူနေသော လူနာများ၏ အငယ်ဆုံးအသက်မှာ အသက် ၂ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုသာရှိသော လူနာများလည်းရှိပါသည်။ ပိုမိုသိလိုပါ က
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကလေး ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူများ
Prof. Suradej Hongeng, M.D., အမေရိကန် ကလေးလူနာအသည်းနှင့် ကင်ဆာပညာရပ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ ထံမှအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များရရှိထားပြီး ၊ အမေရိကန်သွေးရောဂါ ၊ ကင်ဆာပညာရပ်နှင့် ဦးနှောက်အကျိတ်ကုသရေး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံအမြောက်အများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ တွင် အဓိကစူးစမ်းလေ့လာသူ ဖြစ်ပြီး ၊ နိုင်ငံတော်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (U.S.A) ၏ စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် တွဲဖက်စူးစမ်းလေ့လာသူအဖြစ်ပါဝင်သည်။ သူရေးသားခဲ့သော သုတေသနမှတ်တမ်း ၄၅ ခုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသို့ပါ ထုတ်နှိပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။
Assoc. Prof. Samart Pakakasama, M.D.,တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Samart Pakakasama မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကလေးလူနာသွေးရောဂါသုတေသန ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ ကိုရရှိပြီး USA မှ သွေးရောဂါ ကင်ဆာသုတေသန နှင့် Stem Cell အစားထိုးကုသမှု တို့၏ တရားဝင်လက်မှတ် ၂ ခုရရှိခဲ့သည်။ ဆေးကျောင်းတွင် ကထိက အဖြစ်နှစ်အတော်ကြာစွာ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ပြးနောက် ယခုတွင် သုတေသန စာရွက်စာတန်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျက်ရှိပြီး စာရွက်စာတန်းပေါင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားပါ စာရွက်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။
Pornchanok Iamsirirak, M.D., obtainedasecond class honors for Medical degree, and continued her diplomate with the Thai Board of Pediatrics and Thai Sub-board of Pediatric Hematology and Oncology, respectively. In additional to her medical practice, she wasalecturer in Naresuan University Medical School and her several researches have been published. She also received JSTH Asian Pacific Scholarship from The XXIII Congress of the International Society of Thrombosis in regards to her dedication to research.